Fanatanjahan-tena any Danemark | Fitsangatsanganana tanteraka
Fanatanjahan-tena any Danemark
Danemark tanteraka | | Danemark
Danemarka dia paradisa ho an'ny mpanjono. Tsy ilaina ny fahazoan-dàlana hanjonoan'ny tsirairay. Ny tehina manokana ary ny fanjonoana. Ny jono dia avela ao amin'ny seranan-tsambo sy seranana ary na aiza na aiza amin'ny morontsiraka.
Amin'ny faritra amoron-tsiraka sasany dia mandrindra fitsangantsanganana a Fanjonoana ambony miaraka amin'ireo mpanarato eo an-toerana. Mampihatra ny jono rano madio (trout sy salmon) eny mila iray ianao Mombamomba ny mpanoratra, ankoatry ny efa 18 taona mahery. Ireo fahazoan-dàlana ireo dia azo alaina ao amin'ny biraon'ny fizahan-tany, ny paositra na fivarotana fanjonoana manam-pahaizana manokana. Mila mandoa sarany amin'izany ianao.
Ny jono dia tena mahazatra ao farihy misy mponina indray ho an'ny tanjona ara-panatanjahantena. Etsy ankilany, ny jono amin'ny vavan'ny renirano dia iharan'ny fepetra maro. Danemark, araka ny voalaza tetsy ambony, dia paradisa ho an'ireo tia jono. SASANY masoivoho fizahan-tany Mikarakara fialan-tsasatra ho an'ny mpanjono izay misy ny fahazoan-dàlana izy ireo.
El Windsurfing mahagaga izany, iray amin'ireo fanatanjahantena malaza indrindra any Danemark. Mpikorontana maro no afaka mankafy ny moron'ny Jutland, Zealand ary Funen hampihatra an'ity fanatanjahantena ity. Amin'ny foibe fizahan-tany sasany amin'ireny faritra ireny, kilasy an'ny surf ary avelao ny fanofana birao.
Raha tia ny zava-drehetra mifandraika amin'ny ranomasina ianao dia aza misalasala mitsidika an'i Danemark. Ho gaga ianao amin'ny hetsika fanatanjahantena lehibe atolotry ny firenena. Ary ho an'ny sahisahy bebe kokoa, izy ireo koa dia afaka mitafy ny fitafiany sy misasa tsara. Mazava ho azy, aza manantena ranomasina mafana toy ny Mediteraneana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fanatanjahan-tena any Danemark
ka 2 fotsiny ny fanatanjahan-tena mahazatra ??
Buddha sy ny lovany any India
Voaroaka any India